Ankadindramamy : 4 andro aty aoriana, tsy mbola hita ny fatin’ilay ankizy lasan’ny rano | NewsMada
Ankadindramamy : 4 andro aty aoriana, tsy mbola hita ny fatin’ilay ankizy lasan’ny rano
Par Taratra sur 17/02/2016
Nitohy, omaly indray ny fikarohan’ny mpamonjy voina ny fatin’ilay ankizivavikely 10 taona natelin’ny rano teny Ankadindramamy, ny alahady teo. Efa nampiasana fomban-drazana, nametrahana vatan’akondro teo amin’ny toerana nilatsahan’ilay zaza nefa tsy nisy vokany izany…
Efatra andro izay ny nikarohana ny fatin’ity ankizivavikely 10 taona niharam-boina ity, saingy tsy nahitam-bokany izany. Hatramin’ny ora farany nanoratanay omaly, tsy mbola hitan’ny mpamonjy voina ny fatiny. Nanao izay ho afany tamin’ny fahaiza-manaony tamin’ny alalan’ny fampiasana ny fitaovana teo am-pelatanany izy ireo nefa tsy hita popoka mihitsy ilay niharam-boina. Nampiasaina ihany koa ilay fomban-drazana tamin’ny alalan’ny fametrahana vatan’akondro teo ambony rano mba hampitsingevana ny fatiny. Tsy nipoitra mihitsy anefa ny fatiny. Isan’ny mampanano sarotra ny fikarohana ny razana ihany koa ny fisian’ireo honahona sy tsikafona eo amin’ilay rano, araka ny fanazavana voaray hatrany.
Tsiahivina fa ny alahady teo ilay ankizivavikely no lasan’ny rano. Niroso tamin’ny fikarohana ny fatiny ny olona roa tsara sitrapo, afakomaly, saingy namoy ny ainy koa satria tafalentika tao anatin’ilay lakandrano.
Nohamafisin’ny sefom-pokontany ao an-toerana, Rakotondrasoa Albert fa tsy ampy ny fivoahan’ny rano hany ka lasa toerana fivarinan’ny rano maloto avy any amin’ny faritra ambony ity toerana namoizana ain’olona ity. Mihandrona eo amin’ity toerana ity avokoa, araka izany, ny rano maloto rehefa fahavaratra toy izao. Nohamafisiny fa tsy ampy ny fivoahan’ny rano maloto.